Ny "scrape" an'ny Apple Watch sy ny vahaolana | Vaovao IPhone
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, izay fanombohana Apple dia arahin'ny "vavahady". Ny "Antennagate" miaraka amin'ny iPhone 4, ny "Bendgate" miaraka amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, ary tonga izao ny "Scratchgate" miaraka amin'ny Apple Watch. Ity anarana ity dia miantso ny zava-misy fa mpampiasa maro no mitaraina amin'ny tambajotra sosialy sy forum ary izany dia ny Apple Watch "tsy misy antony mazava" no voaporofo. Ny famaranana vy vita amin'ny Apple Watch dia manome endrika mahavariana azy, saingy ilay faravodilanitra toy ny fitaratra dia misy fatiantoka mety ho tsikaritra avy amin'ny ligy. Ny zavatra iray hafa tena hafa dia ny antony tsy nahatonga azy ireo noho ny antony mazava toa ny filazan'ny sasany. Mety ho marina ve izany? Misy vahaolana ve? Ny fanontaniana voalohany dia tokony homena tombotsoan'ny fisalasalana, na dia ny valinteniko (manizingizina aho, ny ahy manokana) dia "TSIA". Ny valin'ny fanontaniana faharoa dia tsotra be: eny, manana vahaolana izy io, ary tena tsotra ihany koa ary mora vidy.
Somary mazava kokoa eto. pic.twitter.com/U3boQY5iqp
- Michael Kukielka (@DetroitBORG) Aprily 25, 2015
Ity mpampiasa ity dia iray amin'ireo nanomboka ny "Scratchgate". Araka ny lazainy amintsika amin'ny fandaharam-potoanany vao niseho ny dian-kapoka, amin'ny fampiasana mahazatra. Azo antoka, andao jerena izay navoakany tao amin'ny Instagram minitra vitsy talohan'izay.
Iza amin'ireo no tsara indrindra?
Sary iray navoakan'i Michael Kukielka (@detroitborg) tao Apr 25, 2015 ao amin'ny 8: 27am PDT
Mahaliana fa ny tadiny dia mipoitra eo amin'ny ilan'ny famantaranandro ihany izay misy fifandraisana amin'ny bokotra Moto 360, bokotra iray misy sisiny maranitra izay tena mahavariana tokoa amin'ny famolavolana ireo faritra voakilasy. Afaka manamarina ireo fahasimbana ireo ve ny fifandraisana tsotra toy izany? Ianareo izay nanana famantaranandro vy manjelanjelatra mamirapiratra dia azo antoka fa hahafantatra fa izany tokoa no izy. Ny farany vita tsara dia marefo, ary na dia kalitao avo lenta sy mahatohitra aza ny vy, toy ny tranga misy amin'ny Apple Watch araka izay nolazainay taminao tao amin'ilay lahatsoratra ny faharetan'ireo fitaovany, ny sosona manify manome an'ity farany toy ny fitaratra ity dia marefo tokoa. Mazava ho azy, amin'ny zava-misy tsotra amin'ny fitafiana azy, ny fifandraisantsika amin'ny akanjonay, tsy mety hitranga izany, saingy mety hitranga izany alohan'ny fifandraisana kely amin'ny fitaovana mafy hafa ary indrindra amin'ny sisiny maranitra.
Ny vahaolana? Tsotra be. Tsy misy afa-tsy alimo sy polioma manezioma fotsiny no ilainao amin'ilay sary, sy lamba vita amin'ny fibre izay tsy mikororosy. Afaka minitra vitsy dia hamirapiratra indray ny famantaranandronao toy ny andro voalohany. Azonao atao koa ny mitondra azy any amin'ny mpanao famantaranandro raha tsy sahinao ny manao azy. Fa tadidio fa tsy ampirisihina hanao izany matetika satria ny tena ataonao dia ny manala sosona vy manify, saika tsy hita intsony, saingy izany tokoa. Ary ambonin'izany rehetra izany, aza manao an'io fomba io amin'ny alimina Apple Watch anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny "Scratchgate" an'ny Apple Watch sy ny vahaolana
Ny kristaly safira an'ny Apple Watch dia mahatohitra